စိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့် porn အိပ်မက်များကော? - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
RebootNation.org ရှိစိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့်ညစ်ညမ်းသောအိပ်မက်များအကြောင်း Gabe Deem ၏ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
ဒီကိုကြည့်ပါ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုဆွေးနွေးသည့်ဗီဒီယို - "Rebooting: Relapse ဆိုတာဘာလဲ?" - နော Church ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်.
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအိပ်မက်များနှင့် ပတ်သက်၍“ အသုံးပြုခြင်း” ၏အိပ်မက်များလည်းပေါ်ပေါက်လာသည် အခြားသောအင်တာနက်ကဗီဒီယိုအသုံးပြုသူများသည်။ သူတို့ကသွားလော့။
WikiHOW စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကရှင်းပြသည်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကိုလျှော့ချကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုချက်များစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
1) တစ်ဦး relapse စဉ်းစားစိုစွတ်သောအိပ်မက်ဖြစ်ပါသလား
အဖြေ - မဟုတ်ဘူး။ သာမန်ကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်းအဖြစ်မရှုမြင်နိုင်ပါ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ ငါဟာသဘာဝဆုတွေအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအယူအဆရဲ့တကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုငါ (ငါပြန်သွားကြသည်ခဲ့ဘူး) ငါ၏အ reboot စဉ်အတွင်းရှောင်ရှားရပါမည်နည်း
“ သင်၏ကြက်ပေါ် လက်တင်၍ နာရီကိုပြန်စပါ။ ညဥ့်အခါထုတ်လွှတ်မှု, သင်၏မစ်ရှင်အပေါ်ဆက်လက်။ "
အဖြေ - ငါမသိဘူး စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်မသိခဲ့ဘူး၊ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသင်ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ပြီးတော့စွဲလမ်းမှုကနေပြန်လည်နာလန်ထူရေးဟာအပြေးပြိုင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူများအတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာဖြစ်နိုင်သည်။
စိုစွတ်သောအိပ်မက်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုပိုမိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။ ကြည့်ပါ သင်ကလိင်ပြီးနောက်တစ် Chaser လိုအပ်ပါသလား
လူများသည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံများရှိသည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ဦး နှောက်သည်ပြန်လည်ချိန်ခွင်လျှာညှိနိုင်ပြီးနောက်တွင်သူသည်ဘာမျှသတိမမူမိပါ။ အခြားလူများ (အမျိုးသမီးများတွင်လည်းအိပ်မက်ဆိုးမက်ဖွယ်အိပ်မက်ဆိုးများရှိသည်။ ) စိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းစိတ်အပြောင်းအလဲများ၊ ချိုသာသောအသံတိုးပွားမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတိုးများလာခြင်းစသည်တို့ကိုသေချာပေါက်သတိပြုမိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်ပါ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုတိုက်ထုတ်ရန်မကြိုးစားပါ။ သူတို့perfectlyုံသဘာဝပါပဲ။ အချို့လူများကအောက်ပါအရာများကိုတစ်ခါတစ်ရံဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။
hypersexual ပစ္စည်းများဖတ်နေ / စောင့်ကြည့်
ချစ်ပ်များသို့မဟုတ်အခြား junk အစားအစာအမြောက်အမြားစားခြင်း
တ ဦး တည်းရဲ့ကျောပေါ်မှာအိပ်
စိုစွတ်သောအိပ်မက် reboot လုပ်တခုတခုအပေါ်မှာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယူ:
အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက် porn စောင့်ကြည့်အဖြစ်နီးပါးတူညီသည်မဟုတ်။ သငျသညျ PMOing ခဲ့ကြသည်အခါသင်လုပ်ခဲ့တယ်မိမိဆန္ဒအလျောက်အပြုအမူတွေ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံရှိခဲ့သည်။ သတိအပြုအမူတွေ၏စီးရီးကိုသင်ပြန်ဖွင့်အတူနှောင့်အယှက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
တစ် ဦး ကစိုစွတ်သောအိပ်မက်သမျှသောအဘယ်သူမျှမသတိအပြုအမူပါဝငျသညျ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သင်ဘာမျှမတတ်နိုင်ပါ။ ညစ်ညမ်းသောအိပ်မက်များသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ပြီးတော့သုတ်ရည်လွှတ်မှုဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သုတ်ရည်ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရုံပဲ - လုံးဝကျန်းမာပြီးပုံမှန်ပါပဲ။
ပြန်ဖွင့်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောမိန်းမစိုးဖြစ်လာရန်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် PMO ၏အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများတွင်ပါဝင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းသို့မဟုတ်လိင်အိပ်မက်ဆိုးများပြုလုပ်ခြင်းသည်မမှားပါ။
(မှတ်ချက်များ - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအမျိုးသားအုပ်စုတစ်စုရှိတယ် ပိုကြိုက် သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှတ်ပေးရန်အဖြစ်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ - http://www.wetdreamforum.com/ )
Guy (သူအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းအရှုံးမပေးပြီးနောက်ပိုပြီးပြင်းထန်အိပ်မက်နောက်ကွယ်မှရှင်းပြချက်ဖြစ်ယုံကြည်နေအဘယ်အရာကိုဖော်ပြထားတယ်သငျသညျကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်ရှိသည်ဖို့စတင်နေပါသလား? ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင့် dopaminergic ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအနာပျောက်စေနိုင်သောကြသည်!):
nofap ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေမှာ 'ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာသောအိပ်မက်များ' သို့မဟုတ် 'ငါနောက်တဖန်အိပ်မက်မက်နေတယ်' တွေပါ ၀ င်တဲ့ဒီလူများစွာမှာသတိပြုမိသည်။ ဤအချက်သည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အထောက်အထားသည်အပြီးသတ်ဖြစ်သည်။ အိပ်မက်ဆိုသည်မှာ dopamine ဂီယာကြောင့်မောင်းနှင်သောသင်၏ ဦး နှောက် (ဆိုလိုသည်မှာ ventral tegmental area နှင့် nucleus accumbens) သည်သင်၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်များထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ PMO နှင့်အလွန်အကျွံ O သည် dopamine ကိုယ်နှိုက်နှင့်ပြproblemsနာမဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း D2 receptors များကိုလျှော့ချရန်အတော်အသင့်ပြသခဲ့ပြီး dopamine transporters များနှင့်လည်းရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်စတင်၎င်း၏ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ: သင်သည်သင်၏ desensitized ဆုလာဘ်ဆားကစ် re-မလွဲမသွေနေကြသည်။ မျဉ်းချဒီစသည်တို့စသည်တို့ကိုလိင်စိတ်တစ်ခုတိုး, စိတ်ကျရောဂါနှင့် anhedonia ကနေဓာတ်လှေကား, အာရုံနှင့်လှုံ့ဆျောမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, ဦးတည်သွားစေသင့်တယ်
"အဓိကရှေ့တန်းဒေသနှစ်ခုအိပ်မက်ဖြစ်စဉ်တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ကြသည်။ ပထမတစ်ခုမှာမျက်လုံးအထက်မျက်နှာပြင်တွင်ရှိသောအမြှေးများ၏နက်ရှိုင်းသောအဖြူရောင်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒီမှာအလုပ်၏အဓိကစနစ်များတွင် mesolimbic နှင့် mesocortical dopaminergic လမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။ frontal နှင့် limbic တည်ဆောက်ပုံကြားတွင်ချိတ်ဆက်ထားသောအမျှင်များရှိသည်။ dopaminergic လမ်းကြောင်းသည် ventral tegmental fromရိယာမှဖြတ်သန်းသွားသည်၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus၊ Basal forebrain ဒေသများ (nucleus basalis, stria terminalis, nucleus of nucleus accumbens) မှတဆင့်တက်ပြီး amygdala၊ anterior cingulate gyrus နှင့် frontal cortex တွင်အဆုံးသတ်သည်။ dopaminergic လမ်းကြောင်းကိုပျက်စီးခြင်းသည်အိပ်မက်ကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ ထို့အပြင် (ဥပမာ L-DOPA နှင့်အတူ) လမ်းကြောင်း၏ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသည် REM အိပ်စက်ခြင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲအိပ်မက်များ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်များကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒါဟာ mesolimbic နှင့် mesocortical လမ်းကြောင်းရှာဖွေနေဒေသများသို့မဟုတ် ဦး နှောက်၏စိတ်ခွန်အားနိုး command ကိုစင်တာများစဉ်းစားဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်စီးခြင်းသည်အိပ်မက်ဆုံးရှုံးခြင်းသာမကလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူများကိုပါဖြစ်ပေါ်စေသည်။ dopamine လမ်းကြောင်းကိုကူးပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးခြင်းသည် schizophrenia ရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုလျော့နည်းစေပြီး၎င်းတို့ကိုအိပ်မက်ကဲ့သို့သောပြည်နယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ စနစ်ကိုပိတ်ဆို့စေသောဆေးဝါးများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းသက်ရောက်မှုများရှိသော်လည်းအလွန်များပြားပြီးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသောအိပ်မက်များကိုလျော့နည်းစေသည်။ REM အိပ်စက်ခြင်းမှအိပ်မက်ခြင်းသည်အမှီသဟဲပြုနိုင်ကြောင်းနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများကိုမကြာခဏ NREM တွင်အိပ်မက်ဆိုးများအဖြစ်မကြာခဏတွေ့ရသည့် NREM အတွင်းဖမ်းဆီးရမိခြင်းများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤတွင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုကိုယာယီအ in ပေါ်တွင်တွေ့ရသည်။
အဆိုပါ "ရပ်တန့် porn" ခရီးဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး ကိုယူ ခုနှစ် သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲမှ NO porn ဤမျှ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး reset ခဲ့ပါဘူး။ ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှတဆင့် powered! (သူတို့ကယခုမရှိသလောက်ဖြစ်ပျက်။ )
နောက်ထပ်ကောင်လေး, အသက် 24, သူ့ reboot ဖော်ပြ:
ဘဝမှာအော်ဂဇင်၏မရှိခြင်းကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗဟိုပြုဖို့ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ ပထမတော့ကျွန်မအပတ်စဉ်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကို 6-8 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုရပ်တန်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်နေ့တိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန့်ကျဲနေသောချိုင့်ဝှမ်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးလှုံ့ဆော်မှုများဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာငါ nofap မတိုင်မီအတန်ကြာကတည်းကသတိပြုမိပြီး tantric နှင့် Taoist ယဉ်ကျေးမှုများသင်ကြားပေးသည့်အတိုင်းသုတ်ရည်မပါဘဲကိုယ်ခန္ဓာအပြည့်အ ၀ အော်ဂဇင်ကိုလေ့လာရန် ဦး ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သူ၏ဒုတိယ Streak အပေါ်နောက်ထပ်ကောင်လေး:
စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ: ငါသည်ဤစိန်ခေါ်မှုလုပ်နေတူသောငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ဖူးဘူး။ သူတို့ကိုငါအရမ်းမုန်းတယ်၊ တစ်ပတ်မှာတစ်ပတ်လောက်ရပြီးတကယ်စိတ်ပျက်စရာပဲ။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပျက်မှုနည်းပါးလာတယ်၊ ဒီနှစ်အသစ်မှာငါ့မှာမရှိခဲ့ဘူး။ သငျသညျဤအ suckers ရတဲ့လျှင်, သူတို့သည်သွားပါလိမ့်မယ်ရုံမှာစောင့်ရှောက်မည်။ အသက် ၂၃ - ငါယောက်ျားတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ် ငါကပိုပြီးအဆင်ပြေပြီးယောက်ျားတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေအနားမှာသက်သောင့်သက်သာရှိတယ်။
နောက်ထပ်ကောင်လေးမဟုတ်ရှည်လျားသည်သူ၏ reboot စတင်ပြီးနောက် said:
ငါ၏အ PMO အလွန်အကျွံ၏စဉ်အတွင်းငါအစဉျအမွဲစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်ဘူး။ ငါ reboot ၏သုံးရက်အကြာမှာသူတို့ကိုတသမတ်တည်းရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲယခုတွင်အိပ်မက်ဆိုးမရှိသလောက်ရှိသည်။ သို့သော်စိတ်ထဲထားပါ၊ ကျွန်ုပ် PMO ဘ ၀ တွင်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးသည်မဟုတ်ပါ။ ငါနုတ်ထွက်တာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာအိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးပြီးအမှန်တကယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေမက်မက်မက်မက်မက်မက်မက်မက်စိတ်တပ်မက်ခြင်းပါ ၀ င်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါကတစ် ဦး ချင်းအရာပိုလို့ထင်တယ်။ အမှားတစ်ခုကတော့ဒီ site ပေါ်ကယောက်ျားတွေတော်တော်များများကသူတို့ libido နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိအောင်ကြိုးစားကြတယ်။ ဖြစ်ပျက်သမျှနဲ့တူအချို့လိင်စိတ် - အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။
သငျသညျကိုသတိထားမိသောအရာကိုကြည့်ရှုပါ။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်:
(နေ့ ၁၇၀) ကျွန်ုပ်၏ပထမရက် ၁၀၀ တွင် ၂ ပတ်တိုင်းအိပ်မက်မက်နေပုံရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၆၀ ခန့်တွင်စိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခုသာရှိသည်။
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်၏အကောင့်အပေါ်ရေတွက်ဘယ်တော့မှဘူး။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်၊ သင်က၎င်းကိုသွားရန်သတိမပြုဘဲနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် dopamine စွဲချက်သည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါတမင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကွဲပြားနေသည်။ များသောအားဖြင့်ဒဏ္myာရီဆန်သောသတ္တ ၀ ါ၊ မိန်းမအိုကြီး၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သို့မဟုတ်လူသိရှင်ကြားသရုပ်ပြခြင်းတွင်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုတွင်လိင်စိတ်နည်းခြင်းဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ငါ၌ဤအရာတစ်ခုခုကိုရှိခဲ့တယ်မဟုတ်ကြောင်း ... ။ ဒါပေမယ့်ဒီအိပ်မက်ကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ “ အိုကေ၊ ဒါလုပ်ကြရအောင်” လို့မင်းကိုသင်သတိရနေရင်မင်းကစလုပ်ရမယ်။ (နောက်နေ)
ငါအရင်ကစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ဖူးဘူးဒါကြောင့်ကြောက်မက်ဘွယ် haha ​​porn ထက်အဆသန်းပေါင်းများစွာပိုကောင်းခံစားရတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတာအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ အားလုံးကအရမ်းဂရပ်ဖစ်ဆန်တယ်၊ ပြီးတော့ငါနိုးလာတာနဲ့အမျှရောက်လာခဲ့တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲခံစားရတယ်၊ ဒါကသဘာဝပဲ။ ငါရှက်သို့မဟုတ်ဘာမှမခံစားရဘူး။ ဒါဟာအလွန်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအာရုံဖြစ်ခဲ့သည်။
BTW - NoFap'ers အသစ် - စိုစွတ်သောအိပ်မက်များမှရက်နာမှုသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှနည်းလာလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုငါတောင်မခံစားရတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးအပတ်ဟာရက် ၁၀၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်ဒီ ၇ ခုထဲမှာ ၇ ယောက်ရကောင်းရလိမ့်မယ်။ ပထမကကြောက်စရာကောင်းတဲ့၊ လူမှုရေးလှုပ်ခါတဲ့အရွက်လိုငါ့ကိုထားခဲ့တယ်။ ယခုမူကား၊ စွမ်းအင်နှင့်အတူတူပင်, ညဥ့်ကဲ့သို့တူညီသော drive ကို။
စိုစွတ်သောအိပ်မက်များသည်စိုစွတ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤဘဝမတိုင်မီကကျွန်ုပ်၌ ၂ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်သည်နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလများ၌သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီ၊ အပတ်အနည်းငယ်တိုင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုအရာများရှိလာသည်။ အစအ ဦး ၌သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုနှောင့်ယှက်ခဲ့ကြသော်လည်းယခုသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အတွက်နောက်ထပ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သွားသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မကြာခဏဖြစ်ပျက်လာသည်။ အတွက် 110 ရက်ပေါင်း!
ငါသည်ငါ့စိုစွတ်သောအိပ်မက် orgasm သို့သော်သိသာပုံမှန်ထက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျော့နည်း, ညှစ်ငါ့ကို left ခံစားရတယ်။ သူတို့သည်ငါ၏လက်ဝှေ့သမားအကျဉ်းအားဖြင့်စေသောကြောင့်၎င်းသည် (အဝတ်လျှော်သည့် snug ဘက်မှာသူတို့ကိုတယ်, ဒါကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကျွန်မကိုခဏယူ) ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မကြာမီငါလာမည်ဟုဆိုသည်လက်ဝှေ့သမားမှ switched အဖြစ်, အမှုအရာအများကြီးပိုကောင်းတယ်။
သူတို့ကိုငါရေတွက်လို့မရဘူး၊ သူတို့ကငါမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေကသူတို့ဟာအခြေခံအားဖြင့်ပြန်လည်အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလတ်ဆတ်တဲ့အိပ်မက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့အတူအော်ဂဇင်ကငါအရင်ကအကျင့်ဟောင်းကိုပြန်သွားခဲ့ပြီ၊ အလွန်အမင်းမသက်မသာအခြေအနေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲငါကတကယ်ကိုပြန်သွားတာကိုခုခံတွန်းလှန်တာကိုဂုဏ်ယူတယ်။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ၊ ရက်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်မှာညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲ 26 WDs ရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလူတွေသတင်းပို့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေ၊ ယုံကြည်မှု၊ ဆွဲဆောင်မှု၊ ဘာဖြစ်နေတာလဲငါအမြဲတမ်း post orgasm grogginess ၌ရှိ၏။ ငါတစ်ချိန်ချိန်ပြန်သွားနှင့်တစ်ခုခုရိုက်ယူခဲ့သည်နှင့်ငါသူတို့ကိုနောက်တဖန်မရကြဘူး ရက် ၃၀ ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအော်ဂဇင်မရှိဘဲနဲ့အခြေအနေတွေကအရမ်းကွဲပြားနေပြီ။ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုငါမြင်နေပြီ။
ငါအရင်ညညမှာစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်မက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာများသောအားဖြင့်နိုးထလာတယ်။ ငါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုပြနေတာပဲ၊ ငါကနေ့ကောင်းတစ်ခုပဲ။ ငါ porn ကိုကြည့်တဲ့အခါငါစိုက်ထူမရနိုင်သောသို့မဟုတ်ငါဒုတိယထိုးဖောက်မှုဖြစ်ပျက်လာနိုင်ဘူးရှိရာအိပ်မက်တွေမက်လေ့ရှိတယ်။ အခုကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကအရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်လာနေပြီ။ လူတွေကကျနော့်အမြင်မှာစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေအကြောင်းမထင်မှတ်သင့်ဘူးလို့တချို့ကအိပ်မက်တွေကမသိစိတ်တစ်ပိုင်းဆက်သွယ်မှုဖြစ်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားနေတာ၊ ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေကြောင့်အိပ်မက်ဆိုတာမသိစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအိပ်မက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြည့်စုံသောပရောဖက်ပြုချက်အဖြစ်ပြုမူသည်။
အခုတော့ Nocturnal ထုတ်လွှတ်မှုဟာပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်၊ ငါအတွက် PMO ကနေလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်ဆုတစ်ခုလိုပါပဲ။
(နေ့ ၄၅) စိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အားအင်ပြည့်ဝပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုကိုပိုဖယ်ရှားပေးမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော့်ကိုအလုပ်မလုပ်ဘဲသုတ်ပိုးကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတာသိရတာဝမ်းသာစရာပါပဲ။
တချို့က reboot ကျန်းမာရေးလက္ခဏာအဖြစ်စိုစွတ်သောအိပ်မက် ်. :
နောက်ဆုံးမှာဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ပျက်မလဲ၊ အဲ့တာမှန်တယ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာသည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း P နှင့် M ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အရာမဟုတ်ကြောင်းသိရခြင်းကကောင်းသည်။
စိုစွတ်သောအိပ်မက်ငါ့အဘို့အလွန်ခဏခဏမဖြစ်ပျက်သောဖြစ်ကြသည်။ ငါနှစ်ခုသာဒီ Streak ရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာသူတို့တစ်ကြိမ် 40 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုငါ့အဘို့ဖြစ်ပျက်ပုံရသည်။ သူတို့လာလုပ်ပေးတဲ့အခါသူတို့သညျကောငျးကငျများမှာ! ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တာအတွင်းမည်သည့်ကျဆင်းမှုသတိထားမိကြပါဘူး။
(ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့အကြံဥာဏ်) နောက်ဆုံးတော့ ၃၄ ရက်ခန့်မှာငါစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါဟာမင်းလိုပဲစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တွေကိုမသိမသာခုခံတွန်းလှန်ခဲ့တယ်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာသင်၏ ဦး နှောက်သည်နှိုးဆွသောအတွေးများကိုတွန်းလှန်ရန်ညှိထားသောကြောင့်သင်အိပ်နေစဉ်တွင်သင့် ဦး နှောက်သည်ထိုခုခံအဆင့်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ ဦး နှောက်သည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုတွန်းလှန်နေသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်း၏သဘာဝထုတ်လွှတ်မှုအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ရန်လိုပြီး၊ သို့သော်၎င်းကို ဦး ဆောင်သည့်နေ့နှင့်ညများတွင်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့တည်ဆောက်မှုဟာအရမ်းပြင်းလွန်းလို့အော်ဂဇင်ကိုလိုအပ်တာကဆီးသွားဖို့လိုတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အဆိုပါတိုက်တွန်းစစ်မှန်သောလိင်စိတ်ကဲ့သို့မခံစားရဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့တွန်းအားပေးတောင်မှမဟုတ်ဘူး။ ငါကငါခေါ်သကဲ့သို့ငါပဲလွှတ်ပေးရန်တပ်မက်စေသည် "ရုံစိတ်ပျက်စွမ်းအင်" ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်သို့ ဦး တည်သည့်ညများ၌ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်များကိုလိင်မှုဆိုင်ရာအမှတ်အသားအဖြစ်မှတ်မိခြင်းမရှိသော်လည်းအော်ရီဂရပ်စ်အကြောင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော့်စိတ်ကခုခံတွန်းလှန်နေတုန်းပဲ။ ဒါကြောင့်တစ်ညမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို“ စိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ခြင်းသည်ကောင်းသည်” …။ အဲဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ၊ အဲဒါကိုမတိုက်ပါနဲ့” လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ပြောခဲ့တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ သဘာဝကနောက်ဆုံးတော့လမ်းကိုလျှောက်သွားတယ်။ ဒါကမင်းကိုပြုတာပဲ။ သင်မအိပ်ခင်အနားယူရန်ကြိုးစားပါ၊ ခုခံ။ မထားပါနှင့်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်ပြောပါ။ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလျော့ကျစေပြီးလွှတ်ပေးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ တင်းမာမှုတွေအားလုံးပြီးသွားပြီလို့သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုသတိပြုပါ Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုယာယီတစ် relapse ဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသော။
ငါ့အဘို့, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အတူပြproblemနာကစိတ်ခံစားမှုယိုစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသိပ်မရှိပုံရသည်။ ဝမ်းနည်းစရာကငါကြိုးစားအားထုတ်သမျှအားလုံးကိုအားပေးပြီးအားနည်းတဲ့အော်ဂဇင်ရတဲ့အခါ။ ရလဒ်ကတော့ခံစားမှုလိုမူးရူး / စွဲတာနဲ့တစ်နေ့ကိုအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ရတာပဲ။ ငါထင်တာတော့ဒါကငါ့ ဦး နှောက်ရဲ့အရိပ်လက္ခဏာတစ်ခုလို့မထင်ရသေးဘူးထင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါတကယ်ထူးဆန်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ MO မတိုင်ခင်ကငါဟာငါ့ကိုကုသနေသလိုခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်, သူတို့ထဲကအကြီးမားဆုံးငါငါ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်နှင့်အတူကျေနပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုစိုစွတ်သောအိပ်မက်များပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်ကိုဘယ်တော့မှမခံစားခဲ့ပါ၊ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာသာမာန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအဆင့်သို့ပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုးဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ငါကသူတို့နဲ့ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့အော်ဂဇင်တွေရှိပြီးမိန်းကလေးတွေနဲ့လိင်ကိစ္စတကယ်စိတ်ကူးနိုင်လို့ပိုသဘာဝကျတယ်။ တွဲဆက်ထားသော ဦး နှောက်ကို ပို၍ စိတ်ကျေနပ်စေခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနေချိန်မှာဒါကဘာမှမရှိဘူး - ဘာမှမဆက်စပ်ဘူး၊ စိတ်ခံစားမှုလည်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒါကကျွန်တော့်အမြင်ပဲ။ တချို့ယောက်ျားတွေက MO နဲ့ပြproblemsနာမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီကိုသူ့ခန့်မှန်းသည်။
ကျွန်ုပ်၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ၎င်းသည်ငါတစ်ခါမျှမဖြစ်နိုင်သည့်ဟန်ချက်ကိုဖန်တီးရာတွင်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်ပေးသုတ်ရည်လွှတ်နှင့်အတူအချိန်မီအော်ဂဇင်။ ငါသဘာဝစီးဆင်းမှုနှင့်အတူဝင်။ အဖြစ်အရမ်းခံစားရတယ်။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်မည်သို့ဂရုစိုက်သည်ကိုအံ့သြစရာကောင်းသည်။
(နေ့ 90) တစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်နောက်မှငါအနည်းငယ်စိတ်ဓာတ်ကျခံစားရသည်နေ့ကိုအပြီး, (ယခုတိုင်အောင်4ကြိမ်ဖြစ်ပျက်), နှင့် Two-သုံးရက်ထိုနေ့ရက်ပြီးနောက်ငါတကယ်ကြီးမြတ်ခံစားရသည်။
ကျွန်တော်ဟာတစ်ကိုယ်ရေဘဝမှာအခါအားလျော်စွာ“ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များ” ကိုသုံးလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီခဲ့တဲ့အရာကဆီးအိမ်ကိုငါသွန်လိုက်တိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆီးစီးဆင်းမှုကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ပြီး PC ကြွက်သားကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့တယ်။ အစပိုင်းမှာတော့စီးဆင်းမှုကိုလုံးဝဖြတ်တောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလေ့ကျင့်ခန်းတွေဆက်လုပ်နေတာနဲ့အမျှကျွန်တော့်ရဲ့ PC ကပိုမိုအားကောင်းလာပြီးအချိန်အကြာကြီးမှာအိပ်မောကျနေပြီ။
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့်အတူကျွေးမွေး၏ ... ပင်ပန်းနိုးနိုးကြားကြားနှင့်ငါ့ထူးဆန်းတဲ့လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ခံစားမှုရှိခြင်း, လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှအလိုမရှိ ... etc ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီးခြားခွဲထားခြင်းနှင့်မေ့မြောသို့သွားခြင်းကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ဒါနဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရမယ်ဆိုတာငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိစေပြီးသင်အများစုအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သေချာပါသည် - (၁) စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖယ်ရှားပြီးအထူးသဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းမပြုမီ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအိပ်မက်တွေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သက်သာရာရအောင်ရှာပြီးအကောင်းဆုံးသောအရာကဘာလဲဆိုတာကိုခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ (၂) အိပ်ရာမဝင်ခင်လေးနာရီအလိုမှာသင့်အိပ်စက်အနားယူပါ။ အနည်းဆုံးသင့်အစာအိမ်ကိုအပြည့်အဝမဖြည့်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်မွှေးသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအစားအစာများသည်အလွန်ကြီးမားသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ အိပ်ရာမ ၀ င်ခင်ချောကလက်ကိုစားပါ။ ဘောင်းဘီထဲ၌ရေကန်တစ်လုံးနှင့်အိပ်မည်။ (1) အိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီသင်၏အရာများကိုရေအေးဖြင့်ဆေးကြောပါ။ သင်သည်လိင်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေလိုသောဆန္ဒဖြင့်အိပ်ရာဝင်လျှင်သင်ဘဝကိုမဟုတ်ဘဲသင်၏အိပ်မက်များတွင်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ NoFap ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလုံးဝသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးခံစားနိုင်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။
ငါအိပ်ပျော်နေစဉ်ဂန္ထဝင်ဂီတကိုစတင်နားထောင်ကတည်းကစိုစွတ်သောအိပ်မက်များမရှိခဲ့ပါ။ ယခုအချိန်အထိတစ်ပါတ်ခန့်စိုစွတ်သော dreama မရှိပါ။ ငါသည်ငါ့စိုစွတ်သောအိပ်မက်အဆင့်ကိုကျော်လို့ထင်ပါတယ်။
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုရသည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာနိုးလာပြီးနောက်နောက်တစ်ကြိမ်အိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့သည် ငါ ၃ နှစ်အရွယ်မှာအိပ်ပြီးအိပ်ရင်တောင်မှငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမက်မိပြီ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ငါ ... အဖြစ်မကြာမီငါနိုးထအဖြစ်အိပ်ရာမှထ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များနှင့် Oversleeping
ငါကိုယ်တိုင်အမြဲတမ်းစိုစွတ်သောအိပ်မက်များမက်ခဲ့ဖူးပြီးသူတို့ကိုတကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ သူတို့ကိုငါဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ် သင်တို့ထဲကအချို့သည်ငါဒီမှာဖတ်ပြီးသကဲ့သို့, မရှိသလောက် / ဘယ်တော့မှတစ်ခုတွေ့ကြုံခံစားချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဒီလှည့်ကွက်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ပတ်လောက်ကတည်းကစမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီအချိန်ကတည်းကစိုစွတ်တဲ့အိပ်မက်တစ်ခုမရှိခဲ့ဘူး။ ငါပုံမှန်အားဖြင့် NoFap မှာအပတ်တိုင်း ၁- ၂ လောက်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်တော့မဟုတ်ဘူး။ လှည့်ကွက်သည်တကယ်လွယ်ကူပြီးသင်အိပ်မပျော်သောအိပ်မက်ကိုမက်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်နှိုးခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအရာများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆိုပါလှည့်ကွက်: အိပ်ရာမ ၀ ယ်ခင်အိပ်ရာမ ၀ ယ်ခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို“ ယနေ့ညမှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်မရှိ” လို့ပြောပါ။ (သို့)“ ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ညတွင်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိလိမ့်မည်” ဟုသင့်ကိုယ်သင်ပြောပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုမလိုချင်သောကြောင့်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမကြိုးစားခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တကယ့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်သည်!) ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည် ဒီလှည့်ကွက်သည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်နိုးထရန်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ, ဒါပေမယ့်အချိန်အများစုမဟုတ်ပေမယ့်အချိန်အများစုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, ဟုတ်ကဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာလဲကျွန်တော်မသိဘူး၊ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြောခဲ့သည့်အတွေးသည်သင့်စိတ်ထဲတွင် 'ချိတ်ဆွဲထားခြင်း' ဖြစ်သည်၊ ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူး၊ ငါသိတယ်၊ စိတ်ကူးကထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောပါနဲ့၊ မစမ်းခင်မစီရင်ပါနဲ့။ ဖတ်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လှည့်ကွက်: 1 ခြေလှမ်းအတွက်စိုစွတ်အိပ်မက်များ (Nocturnal ထုတ်လွှတ်) ကိုရပ်တန့်သို့မဟုတ်သွေးဆောင်ဖို့ကိုဘယ်လို!
ငါစိတ်ဖိစီးမှုရသောအခါငါသူတို့ထဲကပိုရ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာဟာသူ့ဘာသာသူပိုကောင်းအောင်လုပ်တာနဲ့တူတယ်။ ဆိုလိုတာက အကယ်၍ သင်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားလျှင်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အရာအားလုံးသည်နောက်ဆုံးတွင်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုလျော့နည်းစေလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုရှောင်ရှားရန်အထောက်အကူပေးပုံမှာသင်၏ PC ကြွက်သားများကိုညှစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်စိုက်ထူရသည့်အခါတိုင်းခက်ခဲသည်၊ ၄ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်ထိ ဒါဟာတင်းမာမှုတိုးမြှင့်စေဟန်, ဒါပေမယ့်ခဏစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စိုက်ထူသွားကြောင်း, တင်းမာမှုသွားပြီ, စိတ်ဖိစီးမှုသွားပြီ။ သငျသညျအိုပြီးနောက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခံစားရပေမယ့်ရက်နာမပါဘဲ။
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုအတော်လေးကျရောက်နေတဲ့, ဒါကြောင့်ငါမရကြဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ့ကျောပေါ်မှာအိပ်စက်ခြင်းကသူတို့ကိုကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါတွေ့ပြီ။
ထိပ်တန်းကူးကျော်ပေါ်တွင်ခြေထောက်နှင့်သင်၏ဘက်မှာအိပ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုတားဆီးဖို့ဒီအနေအထားတွင်အိပ်။ ဒီအနေအထားကခက်ခဲသင်ပင်တစ်ခုစိုက်ထူရဖို့စေသည်, တစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကနေတစ်ဦးတည်းသုက်ကြကုန်အံ့။
စိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခုအဆုံးထားလိုပါသလား? ရုံနေ့စဉ်အအေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းကိုယူပြီး start 😉
ဒါဟာတကယ်ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် နေ့စဉ်ရေအေးခဲသည့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုနှင့်ကျွန်ုပ် Streak ကိုစတင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်ညတွင်ဖြစ်စေ၊ အဲဒါကကြားနေတာပဲ။ ငါ့ကိုကူညီမယ် trust ယုံကြည်တယ် trust
NoFap ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပေမယ့်ငါအိပ်စက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များရှိသည်။ ငါ (နိုးနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲကိုပိုမိုနာရီပြန်အိပ်စက်ခြင်းကိုသွား) oversleep သည့်အခါအစဉ်မပြတ်ငါတစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိတယ်, ငါ့နောက်ဆုံးခြောက်လစိုစွတ်သောအိပ်မက်ဤနည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားစိုစွတ်သောအိပ်မက်ငါ့နောက်ထင်တဲ့ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် fetish အကြောင်းကိုမွဲဖြစ်ကြသည်။ [သငျသညျနိုးထလာသောအခါဒီတော့တက်ရ။ ]
ငါသာအဖြေကိုအချိန်ဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ သငျသညျသစ်ကိုလမ်းကြောင်းချသွားကြဖို့သငျ့စိတျလေ့ကငျြ့ပေးသည့်အတိုင်း, သင့်ခန္ဓာကိုယ်နောက်ဆုံးမှာနောက်ကိုလိုက်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးသင်ယူဖို့အော်ဂဇင်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် forgoing စတင်ခဲ့သည့်အခါတူညီတဲ့အရာငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက် karezza။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှထွက် petered ။ ငါမှန်တယ်မှတ်မိမယ်ဆိုရင်တောင်တစ်နှစ်ပြည့်သွားနိုင်တယ်။ သူတို့ရပ်တန့်သည်အထိနည်းပါးလာနှင့်နည်းပါးလာ။ ငါမလုပ်မိတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်နှက်တာ၊ သင်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အရာကိုထိန်းချုပ်သည်။ ချွေးမမပေးပါနဲ့ Nocturnal ထုတ်လွှတ်မှုသည်သူ့ဟာသူလျော့သွားသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါကရှိရာသို့အလျင်အမြန်ရပ်တန့်စေရန်အထူးအကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်လှည့်ကွက်များသိကြ၏။ အချိန်သာ။
ထိုသီအိုရီကိုကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကအတည်ပြုသည်။ ငါဘယ်တော့မှမရှောင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကအပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှာမင်းရဲ့ပထမဆုံးအော်ဂဇင်ဟာသင့်အိပ်မက်တွေထဲမှာဖြစ်ပျက်မယ်၊ ငါတစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မပထမဆုံးလိင်စိတ်ခံစားမှုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာငါက porn နဲ့စပြီးတစ်နေ့ ၁ မှ ၃ ကြိမ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေလုပ်နေလို့ပါ။ ရှင်းနေသည်မှာကျွန်ုပ်၌ (နှင့်ထိုထက်မက) ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာတင်းမာမှုအားလုံးကိုထုတ်ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် WD မရရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏ပထမဆုံးစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။ ငါမိန်းမတစ်ယောက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပြီးတစ်စက္ကန့်အကြာတွင်အော်ဂဇင်အမြန်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်များတွင်လိင်ဆက်ဆံရန်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သော်လည်းရှုပ်ထွေးသောမြင်ကွင်းများကိုစိတ်ကူး။ မရသော်လည်း၊ မိန်းမတစ် ဦး ၏အိပ်မက်မက်ပြီးနောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း၌ပင်အော်ဂဇင်သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ၅ ပတ်မှ ၆ ပတ်အကြာမှာရက် ၃၀ ကျော်တစ်ရက်မှမရှိဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့ငါတို့ဟာနေ့စဉ် (သို့) ဒီထက်နည်းအော်ဂဲနစ်ကိုအရမ်းသုံးတတ်ကြတဲ့အတွက်ငါတို့ ဦး နှောက်ကသတိလစ်တဲ့စိတ်ကနေပုံစံကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်မိတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ ဦး နှောက်ကိုဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ dopamine fix ။ ၎င်းသည်သဘာဝအလျောက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏အဖြေဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုရှောင်ခြင်းသည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုလျော့နည်းစေကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ငါ PMO ကိုများသောအားဖြင့်, ငါမကြာခဏစိုစွတ်သောအိပ်မက်တွေမက်ခဲ့တယ်။ အခုသူတို့ကသိပ်ကိုခဲယဉ်းပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ၊ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ ကျွန်ုပ်၏အစားအစာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့သော်တကယ့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုကျွန်ုပ်အလွန်စွဲမှတ်မိသည်။ ငါတစ်နည်းပြောရရင်ငါ့လိင်စိတ်နည်းတာကများတယ်။ မနေ့ကငါ (ရှည်လျားသောပြီးနောက်) တစ် ဦး စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်ခြင်းနှင့်ငါ၏အ libido ပြီးနောက်နေ့အလွန်မြင့်မားကြောင်းကိုသတိပြုမိသည်။ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုကိုစွဲလမ်းခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အရမ်းထူးဆန်းတယ်။
ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး4ရက်သတ္တပတ်၌ငါ5စိုစွတ်သောအိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါသာငါမဆိုမျိုးရှိခဲ့ပါဘူး Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု (ငါအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး) အိပ်မက်အချို့သည်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်သိကျွမ်းသောလူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်မသိသောပါဝင်ပတ်သက်သူအချို့၊ နှင့်တစ် ဦး တည်းသာပါဝင်ပတ်သက် porn (ငါ chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ရာတစ်ခုဖြစ်သည်) ။ အိပ်မက်များအားလုံးသည်အိပ်စက်ခြင်းမတိုင်မီနာရီများအတွင်းအရက်နှင့် / သို့မဟုတ်အိုးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ငါစိုစွတ်နေသောအိပ်မက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဘာမျှမတတ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ reboot ကိုနှေးကွေးစေမည့်အရာဝတ္ထုများကိုရှောင်ခြင်းအပြင်။
ငါမကြာသေးမီကညနှောင်းပိုင်း၌အစာစားခြင်းရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ကတည်းက WD မရှိခဲ့ဘူး။ မျိုးရိုးဗီဇအရဖြစ်တည်မှုသည်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ 1 လသက်သတ်လွတ်စားပြီးနောက်, celibacy ပုံမှန်ဖြစ်ပုံရသည်နှင့် celibacy မဟုတ်သောအခြေအနေသည်အခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီပါ။
4 ~5ရက်ပေါင်းအရေးပါသော (ဥပမာ, တစ်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်တင်ဆက်မှု, ဒါမှမဟုတ်ကစားနည်းများ-ပွဲစဉ်) ဖြစ်ရပ်မတိုင်မီငါဖြစ်ပျက်ကနေအရာ၏ဤမျိုးကိုတားဆီးချင်တယ်။ (အဆိုပါစိတ်ကူးများတည်ငြိမ်ငါ၏အစွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြင့်မားသောဦးနှောက်ဓာတုဗေဒစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ) ကျနော်ထိုကာလအတွင်းမှာပြုပါဘယ်အရာကိုငါဖြစ်ပျက်ကနေစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်, ငါ၏ကောင်းကင်တမန်တို့ကိုမမေးထွက်-အသံကျယ်, အိပ်ပျော်နေသောရှေ့မှာရှိ၏။ တော်တော်များများသင်ရနိုင်သကဲ့သို့ unscientific, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်တယ်ကွောငျးတှေ့: p
စာရွက်များပေါ်တွင်သင်၏လက်ကို တင်၍ နောက်ကျောတွင်အိပ်ပါ၊ ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုရသည့်အချိန်များသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်အစာအိမ်တွင်အိပ်နေသောကြောင့်အိပ်ရာပေါ်၌ပွတ်တိုက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ဆုကြေးငွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမရှိပဲ၊ အမှန်တကယ်မှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်မက်ရန်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တစ်ခုတစ်ခုရှိရမည်။
စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုမည်သို့ရပ်တန့်နိုင်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ, သင်တစ် ဦး စိုစွတ်သောအိပ်မက်၌ Lucid ဖြစ်လာလျှင် ... သင်ရုံ STOP အော်! ပြီးတော့အိပ်မက်ကရပ်တန့်သွားပြီး၊ မင်းဟာသုက်ပိုးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲနိုးလာမှာပါ။ အခြားအကြံပေးချက်များသည်အဝတ်အချည်းစည်းနှင့်သင်၏နောက်ကျောပေါ်တွင်အိပ်ခြင်းဖြစ်သည် (လိင်တံကိုဖိအားပေးခြင်း = စိုစွတ်သောအိပ်မက်များမက်ဖွယ်ရှိသည်) ။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်တွေကိုအိပ်ရာမဝင်ခင်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုမကြည့်ပါနဲ့။ “ Ham-Sah” pranayama ကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်တော်သန့်ရှင်းသောလိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များသည်စိုစွတ်သောအိပ်မက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသောအိပ်မက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။
ဒါက blokes အဘို့ဖြစ်၏ ငါဒီမှာ 10 နှစ်ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာတစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ပေါင်းပါပြီ။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါအနည်းငယ်ထပ်ထည့်ချင်ပါတယ်။
* အကောင်းဆုံးအရာလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်ပါသည် Karezza.
သငျသညျတစ်ခုတည်းလျှင် * လေ့ကျင့်ခန်းအတန်အသင့်နေ့တိုင်းအချို့စွမ်းအင်ကိုတက်လောင်ကျွမ်းနှငျ့သငျအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သူရဲ (ထိုစားပွဲခုံမှာအဘယ်သူ၏ဝှေးကျုံ့နှင့်စကားသံကိုမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါတယ်တနေ့လုံးထိုင်သောမ weedy ကောင်လေး) ကိုစောင့်အဖြစ်။
* arguements နှင့်သင်စိတ်ခံစားမှုပြီးစိတ်ပျက်စေသည်ဘာမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်အဆင်မပြေအိပ်ပျော်နေစဉ် plesaure ရှာကြံစေပါတယ်။ ကြောင်းမှတ်ချက်အပေါ်ရုံတနေ့လုံးအနားယူရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါကအရေးကြီးဆုံးသော့ချက်နဲ့တူပုံရသည်, မျှမျှတတနဲ့စိတ်အေးလက်အေးနေဖို့။
* ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စိတ်အေးလက်အေးခံစား, အိပ်စက်ခြင်းမပြုမီအချို့နူးညံ့သိမ်မွေ့ဘာဝနာကိုကူညီနိုငျအိပ်သွားကြဖို့ကြိုးစားပါ။
* သင်၏အစာအိမ်ပေါ်တွင်အိပ်မပျော်ပါ။ အိပ်ရာပေါ်မှာတင်းကျပ်စွာအဝတ်မဝတ်ရ။
* ယေဘုယျအားဖြင့်တကယ်စပ်အစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဝက်သားကိုရှောင်ရှားကကူညီလိမ့်မည်။
* သင်၏အတွေးများ၊ လုပ်ရပ်များ၊ ခံစားချက်များစသည့်နေ့များတွင်တပ်မက်မှုမဖြစ်စေရန်ကြိုးစားပါ။ ဤအရာများကိုရှောင်ရှားရန်တင်းမာမှုကိုမဖြစ်ပေါ်စေပါနှင့်။ စိတ်ကူးသည်ဖိနှိပ်မှုမဟုတ်ဘဲနားလည်မှုနှင့်သင်ယူခြင်းဖြင့်ကျော်လွှားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
* ကျွန်မသင်ယူတစ်ဦးက technique ကိုငါတစ်ခုတည်းအခါစွမ်းအင်အသက်ရှူခြင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 10 မိနစ်သို့မဟုတ်ဒါဖြုန်းလိုကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်လုပ်သလိုပဲ။ ကျွန်မအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ညဥ့်အခါကိုယ့်နည်းနည်းထိုသို့ပြုကြ၏။
Ham SAH PRACTICE (Samael ၎င်းသည်ယခုဆိုလျှင် Weor ကနေကိုးကားကိုလည်း Belzebuub အားဖြင့်ကောင်းစွာဆုံးမသွန်သင်):
အငြိမ့်ချထိုင်နေ: အရှေ့ပိုင်းလမ်း (Cross-အတော်များများကမျက်စိ) သို့မဟုတ် (ကအဆင်ပြေလက်တင်ကုလားထိုင်ပေါ်) အနောက်ဘက်လမ်း။ ကလေးများကဲ့သို့သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာအနားယူ။
အလွန်နှေးကွေးစွာ, နက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်ခြင်း, နှင့်ဖန်တီးမှုစွမ်းအင်ဦးနှောက်အထိ spermatic လိုင်းများမှတဆင့်မြင့်တက်ကြောင်းစိတ်ကူး; HAAAAAAAMM: စိတ်ပိုင်းဤကဲ့သို့သောစေပြီး Ham ဟုစီရင်။
ဂါထာကိုကျယ်လောင်စွာအသံထွက်သည်နှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်ပါ။ SAH: SAAAAHH …
ခြော, သင်နှာခေါင်းမှတဆင့်ရှူနှင့်ပါးစပ်မှတစ်ဆင့် exhale ။ ဓာတ်များနေစဉ် (သင်နှာခေါင်းမှတဆင့်ဓာတ်များနေကြသည်ကတည်းကစိတ်ပိုင်း,), သငျသညျမွငျ့မွတျ Syllabics Ham "mantralize"; သငျသညျ exhale နေချိန်မှာသင်မူကားသံကိုအတူ Syllabics SAH တို့အကြားနိုင်ပါတယ်။
ပိုများသောအကြံပေးချက်များ စိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုရှောင်ရှားဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦး esoteric ကွေးမြားမှာအသုံးဝင်အကြံပေးချက်များရှာတွေ့စေခြင်းငှါ ဒီ site။ ဒါကြောင့်အကြံပြုသူ said:
ဤ site အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောတရားအားထုတ်ရန်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အဝိုင်းလိုက်သောနည်းစနစ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းထားပြီးထောက်ခံမှုဖိုရမ်များရှိသည်။ သင်၏စိုစွတ်သောအိပ်မက်ဆိုးကိုမေးသည့်အဖြေရှိလျှင် (Tantra အပိုင်းကိုကြည့်ပါ) ။
သင်တစ်ဦးမြဲစိုစွတ်သောအိပ်မက်ပြဿနာရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်သင်ရှာစေခြင်းငှါ "Spermatorrhea" အရင်းအမြစ်များ ဖတ်နေရကျိုးနပ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ကချဉ်းကပ်အလုပ်အကြံပြုရှိမရှိအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်။ : ဤအစွန်အဖျားစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏လကျမှကပို
ငါစိုစွတ်သောအိပ်မက်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်။ ပိုမိုသတင်းရှိသည်။ ငါဒါကိုမသောက်ချင်ဘူးဒါပေမယ့်ငါကုသနေတာဟာအခြေအနေကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တယ်။ ဒါကရှည်လျားတဲ့သတင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကုသမှုမတိုင်မီ - ကျွန်ုပ်တွင်တစ်ပတ်လျှင်အနည်းဆုံး ၃ WD (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင် ၅) ရှိတတ်ပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ကပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော၊ ထိုနှစ်မတိုင်မီတစ်ပတ်လျှင် ၁ WD ရှိခဲ့သည်။ ငါရှိနေသောကြောက်မက်ဖွယ်အခြေအနေကိုဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ (စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သည်စာသားအရူး၊ ဂျပိန်၊ အမြင်အာရုံမှုန်ဝါးခြင်း၊ လက်ညှိုးထိုးခြင်း၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်မှာ porn ဒါမှမဟုတ် masturbation မလုပ်ခဲ့လို့ပါ။
ကုသမှုတစ်လပြီးနောက်: ငါသည်ဤဆက်ဆံဖို့2ဆရာဝန်များထံသို့ ဝင်. : ပထမဦးဆုံးတ homeopathic ကြီး + သည် .naturiste ဆေးပညာအတွက်အထူးပြု (သူဈ spermatorrhea ခဲ့ယုံကြည်သောသူတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ခဲ့သည်သူအမှန်တကယ်ရောဂါထင်ရှားဘယ်လောက်ကောင်းတစ်ခုစိတ်ကူးခဲ့ သူ့ဟာသူ) နှင့်ဆီးပိုးကူးစက်မှုများအတွက်ပုံမှန်ဆရာဝန်။
ငါလိမ်လိမ့်မည်မဟုတ်, ပထမရက်သတ္တပတ်နှင့်ကုသမှု၏တစ်ဝက်ငါ၏အ WD အမျက်ဒေါသ mode ကိုအပြည့်အဝသို့အပို့, ငါထိုကာလအတွင်း 1 WD ရှိခဲ့ပါတယ် (wierdly အလုံအလောက်ကိုယ့်အဲဒီအချိန်ကသူတို့ကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မဖြစ်) နှင့်ထို့နောက်သူတို့က ရပ်တန့်။ (၃) ပတ်ကျော်အိပ်မောကျသောအဖွဲ့မ ၀ င်ပြီးနောက်ယခုကျွန်ုပ်ခံစားရသောပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်ုပ်မယုံကြည်နိုင်ပါ။ ငါပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်၊ အစွမ်းကုန်ပြန်လာပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ ပိုပြီးစမတ်ကျပုံရတယ်၊ သိပ္ပံနည်းကျတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလိုပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့အရာတွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။
အခုဆိုရင် (ဤသည်သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ကူညီပေးနိုငျပေမယ့်ကိုယ့်နေဆဲတစ်စုံတစ်ဦးကအလေးအနက်ထားသူ့ကိုကြာသည်အထိသူကပိုပြီးဆရာဝန်များကိုသွားအကြံပေး) ကုသမှုများအတွက်:
cefuroxime (ပဋိဇီဝဆေး), diclofenac suppositories, ဆီး akute ။
အဆိုပါ spermatorrhea ကုသမှု:
တရုတ် (homeopathic ဆေးပညာ), Kali phos (homeopathic ဆေးပညာ), salvia glutinosa ဆေးပြား, အင်ဂျလီ၏ tincture, hops ၏ tincture နှင့်လက်ဖက်ရည် (salvia officinalis, Viola သုံးရောင်ခြယ်နှင့် ocimum basilicum ပေါင်းစပ်) ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ: အရေးကြီးဆုံးတဦးတည်းဝေးနေဖြင့်ကိုယ့်အထဲကအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါ၏အအတန်ငယ်အာရုံကြောစနစ်အထဲကအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုစောင့်ရှောက်မကိုင်တွယ်နိုင်မှထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ပါတ်အကြာတွင်သို့မဟုတ်ဈကောင်းသောခံစားရပြီးအောက်ပါညဥ့်ကိုယ်တစ်ဦးစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်သောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းပြန်လည်စတင်ခဲ့ခြင်းမရှိ WD ဤမျှတစ်ဦးပုံစံရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကို (ဆေးဝါးနဲ့ပေါင်းစပ်) ဒီပုံစံရပ်တန့်အစစ်အမှန် abstinence ဤအံ့သြဖွယ်3ရက်သတ္တပတ်မှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ဒုတိယအလေ့လာရေး: တစ် 5-10 မိနစ်ယူပြီး (ဈသာခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်ခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်တင်ပါးဆုံတွင်းဇုန် + လိင်အင်္ဂါဧရိယာပေါ်ရေအေးကိုအသုံးပြုဖို့အဓိပ်ပာယျ) အအေး sitz ရေချိုးပိတ်ဆို့မှုကို, ထိုဇုန်များတွင်နာကျင်မှုလျော့နည်းစေရုံငါ့ကိုအကောင်းခံစားမိစေသည်။
ဒါအကြောင်းပါ။ ဆရာဝန်တွေရဲ့ ၈၀% ကပုံမှန်လို့ဆိုပေမယ့်သူတို့မှားတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာမှန်ပေမယ့်မင်းကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအရာကရိုက်နိုင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်သွားဖို့သင့်သူငယ်ချင်းကိုပြောပါ
ဒီ Watch စိုစွတ်သောအိပ်မက်များကိုတားဆီးရန်လူတစ်ယောက်၏ရိုးရှင်းသောအဖြေအတွက်ဗီဒီယို